Bangiyada Sawirka: Saaxiibka Ugu Fiican Naqshadeeye | Abuurista khadka tooska ah
Pablo Gonder | | Design Graphic, Sawirro, Khayraadka
Fiicnaada sawirada y Waxyaabaha sawirka leh Anaga ahaan mashaariicda waa wax in wax walba naqshadeeye farshaxanistuhuna wuxuu ubaahanyahay inuu sifiican uguxiranyahay midkasta oo kamid ah mashaariicdiisa. Iyagoo wajahaya baahida loo qabo in la haysto waxyaabo sawir leh iyo xawaaraha shaqada ee hadda, waxay u horseedeen dhalashada albaabada internetkat kuwaas oo u heellan keliya abuur farshaxan Ujeedadaas awgeed, iyada oo inta badan qalabkan lagu bixiyo bilaash isla markaana qayb kale looga tago qiimo macquul ah oo la awoodi karo. Bogaggan ayaa loo yaqaan bangiyada sawirka bixi suurtagalnimada inaad soo dejiso sawirada tayo sare leh, marinnada ayaa sida caadiga ah si habsami leh loogu abaabulaa qaybo leh mashiin raadin si loo helo waxyaabaha ay ku qoran yihiin sumadaha.
Haddii aad tahay naqshadeeye, farshaxan ama aad qayb ka tahay wakaaladda xayeysiinta mar uun waad u baahan doontaa hel qalab boggaggan shaqooyinka qaarkood. Waxaa jira shirkado si gaar ah ugu heellan soo saarista waxyaabo la soo wakiishay oo loogu talagalay mashaariicda qaarkood, tani waxay xulafo xoog leh u tahay hal-abuurayaasha doonaya inay qayb ka mid ah shaqada ka helaan xirfadlayaal kale oo leh natiijooyin heer sare ah.
Waxaa jira kumanaan bangiyada sawirka, qaar baa la xushay (bilaash) Waxay bixiyaan tayo sare leh iyo saad badan oo sawirro ah.
Marka hore image Bangiga waxaan ka hadli doonaa waa qallafsanaan. Boggan wuxuu bixiyaa waxyaabo garaaf ah oo tayo sare leh gratuito y dembi baahida loo qabo isdiiwaangalin inaad kala soo baxdo waxyaabaha. Waxaan ka heli karnaa wax walba min vector ilaa jees jees iyo sawiro xallinta sare leh. Waxay leedahay qayb ay soo abaabuleen qaybaha halkaas oo ay suurtagal tahay in wax looga helo si habsami leh, waxaan sidoo kale isticmaali karnaa mashiinka raadinta gudaha. Waxaan muujineynaa suurtagalnimada in lagu soo dejiyo faylasha gudaha PSD(Photoshop).
Bogga xiga waa buufin. Sii nuxurka gratuito y dembi baahida loo qabo isdiiwaangalin si aad u soo dejiso sawir kasta. Si loo helo nuxurka waa inaan ku qornaa raadinta Ingiriis, haddii kale natiijooyin laguma soo bandhigi doono raadinta. Nuxurka ayaa ah abaabulan By "ururinta" halkaasoo sawirrada la isugu geeyay, waa nidaam fudud oo ku habboon raadinta waxyaabo gaar ah.
PixabayWaa a image Bangiga dhameystiran sida ay u bixisaa content gratuito iyo suurtagalnimada in waxyaabaha lagala soo degsado tayada kala duwan (xallinta) Waan soo dejisan karnaa Vectors, sawirro, fiidiyowyo, sawirro iyo noocyo kale oo ah waxyaabo garaaf ah oo bilaash ah. Mashiinka raadinta gudaha wuxuu bixiyaa suurtagalnimada ku raadi qayb ahaan, Jihaynta, cabbirka iyo midabka, xulashooyin kaladuwan oo kaladuwan si loo sameeyo baaritaanno sax ah oo dheeri ah. Si aad u soo dejiso waxyaabaha ku jira waa waxaad u baahan tahay inaad isdiiwaangalisoe laakiin waan ka qaban karnaa Facebook isla markaana la dadajiyo waqtiga aynu ku lumino diiwaangelinta.
Freepik waa a bangiga sawirka vector kaas oo bixiya waxyaabo fara badan oo muuqaal leh oo suuragal ah oo lagu soo dejisan karo qaabab kala duwan kala duwan Inkasta oo nuxurkeeda ugu weyni ay diiradda saareyso sawirrada dulinka, Waa suurtagal in la soo degsado sawirro xitaa haddii uusan taagnayn xilligan. Mashiinkaaga raadinta ayaa kuu oggolaanaya inaad ka raadsato waxyaabaha ay ka kooban tahay qaab (PSD) iyo qaabka (pixel ama vector) sidoo kale wuxuu leeyahay qayb ay abaabuleen calaamadaha ee sawirada caanka ah.
Waxaan horeyba u haysanay agab nagu filan si aan ugu helno nuxurka mashaariicda mustaqbalka ee garaafyada taas oo aan ugu baahanahay sawirro Tayo sare.
ka bangiyada sawirka Iyagu waa xulafaysi awood leh oo naga caawiya inaan shaqeysano laakiin waa inaan taxaddar yeelanaa had iyo jeer kuma tiirsana iyaga Si loo abuuro waxyaabahayaga, waxaa lagugula talinayaa inaad u adeegsato wax qaas ah ama qaab kaliya u sameeya qayb yar oo ka mid ah mashruuceena.
Thanks Eva Sánches Clemente kaalinteeda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Design Graphic » Bangiyada sawirada: saaxiibka ugu fiican ee naqshadeeyaha
Waad ku mahadsantahay wadaagista maqaalkani waa mid aad u faa'iido badan, waxaan ku cusubahay adduunkan waxaanan hubaa inaan u isticmaali doono mid ka mid ah bangiyadan mashaariicda mustaqbalka.
Jawaab Karent Liliana García Silva
Waad ku mahadsan tahay daabacaadda maaddadan muhiimka ah, waxaan ku cusbaa adduunka naqshadeynta oo hubaal mar uun baan isticmaali doonaa mid ka mid bangiyadaas, waa maqaal aad u wanaagsan.
Wax ku biirinta aadka ufiican ee aduunkan laga bilaabo runtiina bangiyadan ayaa waxbadan iiga faaiidaysan doona, mahadsanid.
Jawaab Lili Garcia
Wix ayaa farshaxanka ku leh $ 36 milyan.
Tartan caalami ah oo casri ah